Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Qaraxyadii Guryaha Ciidanka Mariiniska
Qaraxyadii Guryaha Ciidanka Mariiniska
Lubnaan | Oktoobar 23, 1983
232-kii Oktoobar, 1983, baabuur bam siday ayaa ku qarxay xeradii ay degganaayeen Ciidanka Dawladaha kala duwan ee Mareykanka iyo Faransiiska ee Lubnaan. Waxaa weerarka ku dhintay boqollaal ciidanka ka tirsan, oo ay ka mid ahaayeen 241 Ciidanka Mareykanka ee Mariiniska. Ciidanka Dawladaha kala Duwan waxay ku sugnaayeen dalka Lubnaan waxayna ka tirsanaayeen ciiidanka caalamka ee nabad ilaalinta. Hezbollah waxaa la aaminsan in ay abaabuleen weerarka, iyagoo taageero iyo maaliyadba ka helay dalka Iran.
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda waxaya lagu bixinayaan abaalmarin gaarayso illaa $5 milyan haddii la helo warbixin suuragelinays in caddaalad lagu qaado kuwii ka mas’uulka ahaa weeraradan.
Bixinta macluumaad horseedey halka ay ku sugnaayeen Ciidamada Xoogga ee Revolutionary Armed Forces ee Colombia taliyaheeda Edgar Navarro, seddex qof oo macluumaadkaas soo gudbiyey ayaa midkiiba la siiyay $300,000.